Chitsva patent yeApple Tarisa nekutenderera dial | IPhone nhau
Patent nyowani yeApple Tarisa nekutenderera kutenderera
Ehezve, kuve neiri patent kunyoreswa kunosimbisa kuti Cupertino anoda kuvandudza dhizaini wachi yayo uye zvine musoro, kunyangwe iyo yazvino iri yakanaka chaizvo, haina kuchinjwa kubva payakatangwa. Izvo hazvina kukodzera kutaura kuti yazvino iyi ishoma gobvu, ishoma paupamhi uye ine yakawanda skrini, isu tiri kutaura nezvayo shanduko yakakura yekugadzira.
Mawadhi ehupenyu hwese agara akatenderera uye Apple payakaunza yayo Apple Watch vazhinji vakaratidza kusagadzikana kwavo nezvazvo. Nhasi ndiyo yakatengesa zvakanyanya smartwatch pamusika, nechikonzero. Chero zvazvingaitika, Apple iri kuongorora nesarudzo nyowani nguva dzose uye izvi patent ine wachi yakatosiyana maererano neyakagadzirwa ndiyo humbowo.
Kana isu tichiona mamodheru apfuura eApple wachi tinoona kuti pane shanduko, asi mashoma. Mune ino kesi, iyo yakanyoreswa patent inonzi «Ratidza Module uye System Zvishandiso uye yakaburitswa nenhepfenyuro dzakasiyana siyana inoratidza skrini inochinjika iyo yaigona kuputira chiuno mune imwe nzira ye ergonomic, ine mamakisi ekuona ari nani achienzaniswa neiyo yazvino modhi uye pamusoro pezvose ine dhizaini yedenderedzwa.
Pasina mafuremu pachikamu chechiratidziro kana kunyangwe huremu hushoma kune hwese mamwe mapoinzi anogona kuvandudzwa. Pane ino nguva, iyi patent inoita kunge chinhu "chakaomarara kuona" munguva pfupi, asi zvinoita sekunge isu dhizaini yeApple wachi yeramangwana. Izvo zvine musoro kuverenga kuti Apple inoda kushandisa iyo patent uye akafanana dhizaini inoratidzwa. Chero zvazvingaitika, vashandisi vazhinji vangakoshesa wachi yakatenderera maererano nedhijitari, ini pachangu sekunge ichingoshandawo kana nani pane iriko irori, dhizaini yacho yatove yakanaka.
Ungatenga Apple Watch ine yakatenderera dial here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Patent nyowani yeApple Tarisa nekutenderera kutenderera
Rocket League Sideswipe, yakaziviswa zviri pamutemo yeIOS uye Android
Intel inoda kugadzira Apple nyowani silicon processor kuti isarasikirwe nebhizinesi